Mhuri Yenyu Inogona Kufara — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
bhs chits. 14 pp. 145-153
Upenyu Hwemhuri Hunofadza Mwari
12 Nyika yaSatani iri kuwedzera kuipa, uye pane vamwe vanhu vanoda kukanganisa vana vedu, kunyange kutovabata chibharo. Vamwe vabereki vanoomerwa nekutaura nevana vavo nyaya iyi. Asi vabereki vanofanira kuyambira vana vavo nezvevanhu vakadaro uye kuvadzidzisa zvavangaita kuti vasavhiringwa navo. Vabereki, munofanira kuchengetedza vana venyu.*—1 Petro 5:8.
15 Vana, kunyange kana muchifunga kuti zvakaoma kuteerera vabereki venyu, yeukai kuti kana muri vana vanoteerera, Jehovha nevabereki venyu vanofara nemi.*—Zvirevo 1:8; 6:20; 23:22-25.
Mamwe mashoko anotaura nezvekuti mungachengetedza sei vana venyu anowanikwa muchitsauko 32 chebhuku rinonzi Dzidza Kumudzidzisi Mukuru, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Mwana haafaniri kuteerera vabereki vake kana vachida kuti aite zvinhu zvinopesana nemutemo waMwari.—Mabasa 5:29.